Abenzi bee-smartphone baseTshayina balawula imakethi yaseIndiya | I-Androidsis
Abenzi bee-smartphone baseTshayina balawula imakethi yaseIndiya
Los Abenzi baseTshayina bee-smartphone yonyusa ubukhosi babo kwimakethi yaseIndiya kwikota yokuqala ye-2019.
El Ingxelo yophando utyhila ukuba ezine zeenkampani ezintlanu eziphezulu ze-smartphone eIndiya ngamaTshayina kwaye bazuze isabelo sentengiso esiqinileyo sama-66% kwikota edlulileyo yalo nyaka.
Isabelo sentengiso sikaXiaomi sehle kancinane ukusuka kwi-31% kwikota yokuqala ye-2018 ukuya kwi-29% kwikota yokuqala ye-2019, ngelixa iVivo irekhode ukwanda okukhulu kwisabelo sayo sentengiso kwangelo xesha linye, inyuka isuka kwi-6% kunyaka ophelileyo iye kwi-12 emangazayo. % kwikota yokuqala yalo nyaka. Nokuba iRealme ibone ukonyuka okukhawulezayo kwisabelo sayo sentengiso, kubanjwa isabelo esifanelekileyo se7% kolu rhwebo lukhuphiswano. Isabelo sentengiso se-OPPO sonyuke kancinci ukuya kwi-7%.
Isabelo sentengiso sokuthunyelwa kwe-smartphone ye-Samsung sehle kancinane ukuya kwi-23% kwikota edlulileyo, yehla nge-3% kunyaka ophelileyo. Nangona kunjalo, inkampani ifumene umzuzu kwintengiso yefowuni, inyuka isuka kwi-10% kwikota yokuqala ye-2018, yaya kwi-15% kwikota yokuqala ye-2019.
UJio usalawula isahlulo sefowuni ngesabelo sentengiso se-30%. Ingxelo iyaqhubeka ithi Uthotho lweSouth Korea lweGPS S10 luqhuba kakuhle elizweni, ngokunyusa ixabiso lokuThengisa eliPhakathi (ASP) kwingingqi.
Olunye uphawu olwenze kakuhle kwimakethi yaseIndiya yi-ASUS, ngakumbi kwicandelo lohlahlo-lwabiwo mali, enkosi kuthotho lwayo lweZenfone. I-Tecno kunye neNokia HMD nazo ziqhuba kakuhle. Ukwanda kwesabelo sentengiso seempawu zamaTshayina ngokwendalo kukhokelele ekunciphiseni kokuthunyelwa kwegama laseIndiya. Ikota edlulileyo ibinesabelo esinexabiso eliphantsi kwintengiso yohlobo lwaseIndiya.
Elinye inqaku elibalulekileyo elikhankanyiweyo kwingxelo yile Isamsung yaphumelela i-OnePlus kwi-Q2019 XNUMX ukuba ube ngumenzi wenombolo yokuqala we-smartphone kwicandelo leprimiyamu. Ngenxa yokuba i-OnePlus 7 Pro icwangciselwe ukumiliselwa nge-14 kaMeyi, sinokubona utshintsho kweli candelo kwindawo yokuhlala.
Okokugqibela, uninzi lweenkampani ze-smartphone zenza uxinzelelo olomeleleyo kwintengiso yeevenkile. I-Xiaomi, i-OnePlus kunye ne-Realme zixhamle kugxilwe ngakumbi kwiivenkile zezitena kunye ne-morterokanye. Ke sinokulindela ukuba isicwangciso-qhinga siqhubeke kwiikota ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abenzi bee-smartphone baseTshayina balawula imakethi yaseIndiya
INubia's Red Magic 3 ibonisa umsipha kwiGeekbench. Eyona smartphone yokudlala kwintengiso?
Ngaba iiapps zeHlabathi zivaliwe kwiGoogle Play